Home || Online Tahalka दिनहुँ हस्तमैथुन गर्नु ठीक कि बेठिक ? के के छन् फाइदा र बेफाइदा ? थाहा पाउनुहोस् ।
मेरो उमेर अहिले ३५ वर्ष भयो । विवाह गरेको १० वर्षभन्दा बढी भयो । मेरो सेक्स लाइफ सामान्य छ । न त पत्नीबाट म असन्तुष्ट छु न त उनी नै मबाट असन्तुष्ट भएको मलाई लागेको छ । तर पनि पछिल्लो समय इन्टरनेटका कारण हस्त मैथुनको बानी परेको छ । हस्त मैथुनले कतै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पो ल्याउला कि । वीर्य मात्र होइन शरीरका कुनै पनि कोसिका, तन्तु या अंग बन्न रगतको जरुरत पर्छ । रगतबाट नै पोषक पदार्थ शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छन् र नयाँ कोसिका विकसित हुन्छ । यसबाहेक सबै हार्मोन, इन्जाइम, शरीरमा बन्ने विभिन्न तरल पदार्थ (जस्तै थुक) लाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि रगतबाट नै प्राप्त हुन्छ । शरीरबाट बाहिर निस्कने पिसाब र पसिना पनि रगतबाट छानिएर नै निस्कने हो । शरीरमा रगतको भूमिका सामान ओसार पोसार गर्ने साधनका रुपमा हुने भएकाले सबै कुरामा रगत महत्वपूर्ण भएको हो कतिपय मानिसहरुमा के विश्वास छ भने वीर्य बन्दा रगत चाहिने भएकाले वीर्य नष्ट भयो भने एक प्रकारले रगत नष्ट हुन्छ ।
आयुर्व्दिक डाक्टरहरुले कहिलेकाहीँ यस धारणालाई पक्षपोषण गर्दा कतिपय मानिसमा यस सम्बन्धमा गलत धारणा बस्न गएको देखिन्छ । तर वैज्ञानिक रुपमा हेर्दा यो कुरा पूर्ण रुपले गलत हो । वीर्य बन्ने क्रममा रगत आफैँ सिधै वीर्य बन्ने होइन । जसरी थुकमा हुने पानी र अन्य तनाव रगतबाट आउँछ, त्यसैगरी वीर्यका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ रगतबाट प्राप्त हुने हो । यसर्थ वीर्य बन्ने क्रममा रगत नष्ट हुँदैन ।
आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका अनुसार वीर्य शरीरबाट निस्कनु र शारीरिक मानसिक कमजोरीमा सिधा सम्बन्ध छैन । वीर्य शरीरमा जम्मा गरेर पछि प्रयोग गर्ने उद्देश्यका लागि बन्ने होइन ।
वीर्यमा हुने शुक्रकिटको आयु २–३ महिना हुन्छ र यदि शरीरबाट निस्केनन् भने तिनीहरु शरीरभित्रै नष्ट हुन्छन् । वीर्यको मुख्य काम शुक्रकिटलाई बचाएर राख्ने र सेक्सको समयमा महिला प्रजनन अंगभित्र शुक्रकिटलाई सुरक्षित रुपमा पर्याउने हो । यदि यसको काम आएन भने सपनामा या अरु कुनै बेला आफैँ लिङ्गबाट बाहिर आउनसक्छ । यस अर्थमा न त हस्तमैथुनले कमजोरी ल्याउँछ, न त स्वप्नदोष नै शरीरका लागि हानिकारक हो । वीर्य शरीरबाट ज्यादा निस्कँदा तागत कम हुने भएको भए सायद कोही पनि विवाहित मान्छे कामकाज गर्न सक्दैनथे होला । किनभने सबैभन्दा धेरै वीर्य सेक्स गर्दा नै बाहिर निस्कने हो ।
बिहे हुनुभन्दा अगाडि वा स्थायी यौन साथी नभएको अवस्थामा यौन आनन्द लिने एक मात्र उपाय हो यो । यसमा न त गर्भ रहने डर हुन्छ, न त यौन रोग सर्ने डर रहन्छ न त अर्को पक्षबाट जबर्जस्तीको आरोप नै सुन्नु पर्छ । यस अर्थमा बिना कुनै खतरा यौन इच्छा र तनाव कम गर्ने सजिलो तरिका भएकाले हस्तमैथुन राम्रो कुरा मान्न सकिन्छ ।
यस्ता रोगको बिरामीले नगर्नु हस्तमैथुन
हस्तमैथुनलाई यौन जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा लिने गरिन्छ । तर के उच्चरक्तचाप भएको बेला हामी हस्तमैथुन गर्न सक्छौं त ? के तपाईलाई यो लाग्छ की उच्च रक्तचाप भएको बेला हस्तमैथुन गर्दा कुनै समसस्या झेल्नुपर्ने त होइन । यहाँ हस्तमैथुन र उच्चरक्तचापबीच कस्तो सम्बन्ध छ त ? भन्नेबारेमा चर्चा गरिएको छ ।
क्रियाकलापले रक्तचाप बढ्ने गर्दछः एक स्वस्थ व्यक्ति जब हस्तमैथुन गरेर चरम उत्कर्षमा पुग्दछ तब उसको रक्तचाप पनि स्वभाविक रुपमा बढ्ने गर्दछ । जब तपाई सेक्स वा हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ तब त्यहि हर्मोन रिलिज हुने गर्दछ छ ,जुन हर्मोन तपाईलाई तनाव भएको बेला पनि रिलिज हुने गर्दछ । यहि कारणले गर्दा पनि व्यक्तिले सेक्स वा हस्तमैथुन गर्दा रक्तचाप बढ्ने गर्दछ । यति मात्र नभएर मुटुको चाल पनि यो बेला बढ्ने गर्दछ । यौनसम्पर्क गरेको वा हस्तमैथुन गरेको १० मिनेटसम्म पनि व्यक्तिको रक्तचाप उच्च नै रहेको हुन्छ ।
के हस्तमैथुन रक्तचाप वृद्धि गराउनेमध्येको एक कारण होः हस्तमैथुनलाई रक्तचापको कारण मानिदैन् ।यद्यपी हस्तमैथुन गरेको केहीबेरसम्म भने रक्तचाप उच्च नै रहने गर्दछ । तर यदि तपाई उच्चरक्तचापको बिरामी हुनुन्छ भने हस्तमैथुन ट्राई नगरेकै उत्तम ।
यदि तपाईलाई उच्च रक्तचापको विषयमा जानकारी छैन् भनेः यदि तपाइमा उच्च रक्तचापको समस्या छ तर तपाईलाई यो विषयमा जानकारी छैन् भने तपाइ उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा हस्तमैथुन वा उच्च उत्कर्षमा सेक्स गरिएका व्यक्तिमा कार्डियक अरेस्ट, स्टा«ोक, हृदयघात वा भास्कुलर घात हुन सक्ने संभावना उच्च रहन्छ ।
तपाई यसो गर्नुहोस्ः माथि उल्लेखित कुराबाट डराइहाल्नुपर्देन् । यसप्रकारका घटना निकै कम मात्रामा हुने गर्दछन् । डराउनुभन्दा बर आफ्नो दैनिकीमा धेरै भन्दा धेरै शारीरिक क्रियाकलाप गर्नतर्फ ध्यान दिएमा तपाईलाई फाइदा हुन सक्दछ ।